Shiinaha AUMAN EST-Warshad iyo soosaarayaal | Foton
FOTON AUMAN EST Flagship Truck for long-raul gaadiidka
Mashiinka ISG12E5 / 4/3
Habka Wadista 4 * 2/6 * 4/6 * 2R
Gearbox Nooc Degdeg ah / ZF
Nooca Cab 2490
Xawaaraha Ugu Badan 106/110 km / saacaddii
Hakinta Basaasida Hawada
Cagaf-culus oo loogu talagalay suuqa saadka dhamaadka-dhamaadka ah, waxaa si wada jir ah u soo saaray shirkadaha Foton, BFDA iyo Cummins oo ku saleysan dadaal 4-sano socday oo Yurub ka socday iyo 10 milyan oo km oo tijaabo wadada ah.
Mashiinka Foton Cummins
Barakaca 11L iyo 12L
Ilaa 490hp soosaarka awooda iyo 2,300Nm waxsoosaarka ugu sarreeya
Si dhakhso leh u bilow, u dhimo oo u dhaaf
Buuxin shuruudaha xaaladaha shaqada ee kaladuwan
Hogaaminta qalabka badbaadada firfircoon
iBrake2.9 Mashiinka Biriigu
Biriigga diskiga ayaa leh xasilooni heerkul wanaagsan, waxqabad aad u fiican iyo shucaac deg deg ah. Tikniyoolajiyada jejebiinta mashiinka tamarta sare: illaa 370pas awoodda bareega ugu badan.
La kulan Xeerka Iskuduwaha Ugu Adag
Qaab dhismeedka iyo agabyada qaabdhismeedka cusub ee xoogga sare ayaa lagu hagaajiyay jilitaanka CAE macnaheedu waa inuu la kulmo xeerarka isku dhaca ECER-29-03 ee aadka u adag oo lagu gaaro nabadgelyada wadista sare.
Mashiinka leh baro-kacsan iyo mashiinka sare ee xawaaraha yar, gudbinta AMT, iyo saamiga gadaal ee xawaaraha hoose ayaa sifiican iskuwareejinaya si loo hagaajiyo waxtarka wadista 2%.
Dhammaan - madal cusub oo lagu dhisay tikniyoolajiyadaha hormuudka u ah Yurub iyo soo saarida gawaari culus oo heer sare ah iyo jawi saaxiibtinimo leh iyadoo loo marayo dadaallo wadajir ah oo lala yeelanayo Daimler iyo Benz iyadoo la raacayo heerka 'R&D' ee Jarmalka; astaamaha dhismaha ee ugu waaweyn waxaa wadaagaya dhammaan gawaarida culus ee culus oo ku saleysan Benz SFTP si loo hubiyo tayada gawaarida. Gawaarida oo leh madal cusub oo cusub iyo qaabdhismeed la hagaajiyay ayaa si ballaaran u qaadanaya agabyo iyo farsamooyin cusub si loo yareeyo miisaanka dhintay loona badbaadiyo
Gawaarida oo leh barxad cusub oo cusub iyo qaabdhismeed la hagaajiyay ayaa si ballaaran u qaatay qalab cusub iyo teknolojiyad si loo yareeyo miisaanka dhintay loona badbaadiyo shidaal badan oo ku saleysan shuruudaha amniga Yurub.